Tag: shirka | Sagal Radio Services
Wararkii ugu dambeeyay Shirka Amniga ee ka furmay Baydhabo
Sagal Radio Services • News Report • June 4, 2018
Iyadoo goor dhow uu si rasmi ah u furmay shirka Golaha Amniga Qaranka ayaa waxaa Madaxda dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada oo khudbado ka jeediyay kulanka ayaa ka hadlay ahmiyada ay leedahay amniga.
Shirweynaha Qaran ee dib u eegista Dastuurka oo Shalay ka furmaya Muqdisho
Shirweynaha Qaran ee dib u eegista Dastuurka ayaa ka furmaya magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka qeyb galayaan illaa saddex boqol oo Ergo ka socota Bulshada Soomaaliyeed oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa.
Shirka Golaha Amniga oo maanta la soo gababeynayo iyo war murtiyeed laga soo saarayo
Sagal Radio Services • News Report • February 9, 2018
Shirka Golaha Amniga Qaranka oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka socday Xarunta Madaxtooyada Villa Somalia ayaa maanta lagu wadaa in la soo gabagabeeyo, iyadoo laga soo saari doono war murtiyeed.
Shirka Golaha Wasiirada oo maanta loogaga hadlay qoddobo ay ka mid yihiin amniga
Sagal Radio Services • News Report • December 7, 2017
Shirkii caadiga ahee ee Golaha Wasiirada ee Xukuumada Dawladda Federaalka maanta yeesheen oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Xasan Cali Khayre ) ayaa looga hadlay arrimaha amniga, Heshiiskii Ahlusuna iyo Galmudug, shirarkii Muqdisho ka dhacay iyo warbixino laga dhageystay Wasiirada qaarkood.
Shirka Madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada oo maalintii labaad galay
Shirka u dhaxeeya Madaxda dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ayaa maalintii labaad galay, kaddib markii shalay uu furay Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo oo maanta si rasmi u furay Shirka Wadatashiga Amniga Qaran (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • October 29, 2017
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah Xarunta Madaxtooyada uga furay shirka wadatashiga Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada.
Qodobo laga soo saaray shirkii taliyayaasha ciidamada dowladda federaalka iyo dowlad gobolleedyda
Sagal Radio Services • News Report • September 21, 2017
Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir mudo saddex maalmood ah uga socday taliska ciidamada booliiska dowladda federaalka iyo kuwa dowlad gobolleedyada dalka oo looga arinsanaya hanaanka dhismaha ciidamo booliiska oo isku dhaf ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee shirka Madasha Wada-tashiga oo is mari waa adag uu ka jiro
Sagal Radio Services • News Report • December 18, 2016
Shirka Madasha Hoggaamiyeyaasha dowladda Dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa maalintii 3aad galay, iyadoo la isku mari la’yahay qodobo ka mid ah kuwa looga hadlayo shirka.
Shirka Madasha Wada-tashiga qaran oo maanta la soo gaba gabeynayo iyo qodobo laga soo saarayo
Sagal Radio Services • News Report • May 30, 2016
Shirka Madasha Wada-tashiga Qaran ee Hoggaamiyeyaasha dowladda Dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa maanta lagu wadaa in la soo gaba gabeeyay, kadib markii shalay uu si rasmi ah u furay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Shir Maanta lgu wado inuu Muqdisho uga furmo Madaxda Qaranka iyo kuwa Maamul Goboleedyada dalka
Sagal Radio Services • News Report • April 10, 2016
Mas’uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul-goboleedyada dalka, ayaa lagu wadaa inuu maanta shir uga furmo Muqdisho, kaas oo looga hadlayo qaabka Doorashooyinka, kaddib markii la isla ogolaaday in habka 4.5-ka lagu saleeyo doorashada iyo xulista xildhibaannada soo soda.
Shirka wada tashiga doorashooyinka sanadka 2016 oo maanta ka furmaya Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • October 19, 2015
Shirka Madasha wada tashiga qaran ee hanaanka doorashooyinka sanadka 2016 ayaa maanta ka furmaya magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka qeyb galayaan Madaxda dowladda, Madaxda maamul goboleedyada, Xukuumadda, Baarlamaanka Federaalka, Beesha Caalamka iyo Ururada bulshada.
AKHRISO: Khudbadii Madaxweynaha uu ka jeediyay shirka heerka sare ee Arrimaha Soomaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyay shirka heerka sare ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya, kaasoo xalay lagu soo gaba gabeeyay magaalada New York ee dalka Mareykanka.
War murtiyeedka Shirkga Hiigsiga cusub ee Copenhagen (Akhriso)
Sagal Radio Services • News Report • November 21, 2014
Shirka Hiigsiga cusub ee Soomaaliya oo shalay ka furmay magaalada Copenhagen ayaa laga soo saaray war murtiyeed ka kooban ilaa 24 qodob, iyadoo looga hadlay dhinacyo badan oo ku aadan hiigsiga sanadka 2016 sidii doorasho uga dhici laheyd
Daawo Sawiro:Shir looga hadlayo shidaalka iyo gaaska Somalia oo Maanta ka furmay London
Sagal Radio Services • News Report • October 21, 2014
Shir looga hadlayo shidaalka iyo gaaska Somalia ayaa maanta ka furmay magaalada London ee dalka Britain, iyadoo shirkan ay ka qayb-galayaan shirkadaha shidaala baara ee caalamka, shirkado maal-gashi iyo weliba madax caalamka ka socota oo uu ka mid yahay madaxweynaha Uganda, Yoweri Musevni.
Shir looga Hadlayo Amniga Somalia oo Maanta ka Furmaya Magaalada London
Sagal Radio Services • News Report • September 18, 2014
Shir looga hadlayo ammaanka dalka Soomaaliya iyo xoojinta ciidamada qalabka sida ayaa maanta ka furmaya magaalada Lonodon ee xarunta dalka Britain, iyadoo shirkaas ay ka qayb-galayaan ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda.
Daawo Sawiro:maxaa ka soo baxay Shirkii Mareykanka iyo Afrika
Sagal Radio Services • News Report • August 5, 2014
Madaxweynaha JFS Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga oo ku sugan magaalada Wawshington DC, halkaas oo isaga iyo xubno ka mid ah Xukuumadda Federaalka Soomaaliyeed ay maanta kaga qeyb-galayaan Shir-Madaxeedka taariikhiga ah ee US-Africa, ku dhawaaqay dhowr hindise oo ujeedadoodu tahay awoodsiinta dhallinyarada.
Shir weyne looga hadlayo ariamaha caafimaadka dalka oo maanta ka furmaya Muqdisho.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmaya shir weyne qaran oo lagaga hadlayo arrimaha caafimaadka dalka. Dhaqaatiirtan waxa ay ka kala yimaadeen dalka dibadiisa, kuwaasoo sanado badan ka maqnaa dalka.
Munaasabadda Xirtaanka shirka dib u heshiisiinta Gobollada Jubbooyinka oo Arrimo farsamo awgood dib loo dhigay illaa Berri
Shirka dib u heshiinta oo lagu waday in maanta uu soo xirmo kaddib saddex maalmood oo uu socday ayaa dib loo dhigay illaa maalinta berry ah, kaddib markii la sheegay in ergooyin caalami ah oo ka qaybgeli lahaa xafladda xirtaanka aysan weli soo gaarin Muqdisho.
Shirka Dib-U-Heshiisiinta Jubbooyinka Oo Laga Doodayo Qodobo Muhiim Ah
Shirka dib-u-heshiisiinta shacabka deegaannada Jubbooyinka oo maalintii labaad Muqdisho ka socda ayaa looga dooday qodobo muhiim ah oo ay ugu horeyso sida nabadgalyo waarta looga dhallinkaro deegaannada Jubbooyinka iyo sida loo Qarameyn karo maleeshiyaadka ah ee duleedka Kismaayo ku sugan, maadaama heshiiskii Addis Ababa uu qodobadaasi ku jirtay.
Waxaa maalintii labaad galay shirkii shabacka Jubooyinka leysugu keenaayay ee Muqdisho shalay ka furmay.
Waxaa maalintii labaad galay Shirka dib u hishiisiinta e Shacabka Jubooyinka ee ka socda magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Shirkii dib u hishiisiinta oo manta lagu wado in uu ka furmo Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • November 2, 2013
Xili ay manta ku begantahay maalintii loo iclaamiyay in la qabto shirki dib u hishiisiinta ee deeganada Jubooyinka ayaa waxaa magaalada ka soconaayo qaban qaabadii ugu danbaysay ee qabsoomida shirkaasi.
Daawo sawirrada:Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo daah furay shir looga hadlayo horumarinta iyo dib-u-dhiska Soomaalia
Muqdisho, 28 Oct, 2013….Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa maanta daah furayey shir looga hadlayey horumarinta, iyo dib-u-dhiska dalka Soomaaliya, shirkaan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey oo looga hadlo dhaqan galinta Higsaga Cusub, Waxaana shirkaasi ka soo qayb galay wakiillo ka kala socday xafiiska Madaxweynaha, Baarlamaanka, Wasiiro, Xubno ka socda Bulshada Caalamka, Bulshada Rayidka ah iyo xubno kale oo ka socday gobolada dalka.